Madaxii Jamaacat Islaami oo la xukumay - BBC Somali - Warar
Madaxii Jamaacat Islaami oo la xukumay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Febraayo, 2013, 10:21 GMT 13:21 SGA
Hoggaaiyaha Jamaacat Islaami
Maxkamad gaar ah oo dambiyada dagaalka ee Bangladesh ayaa waxa ay ku xukuntay hoggaamiye sare ee kooxda Islaamiga ugu weyn dalka Bangladesh xabsi daa'in doorkii uu ku lahaa xadgudubyadii la sameeyay intii lagu guda jiray dagaalkii xornimo doonka muddo haatan afartan sano laga joogo.
Abdul Kader Mullah oo ahaa hoggaamiyaha Jamaat-e-Islami ayaa lagu helay dambi ah inuu ku lug lahaa dilkii boqolaal dad rayid ah oo aan hubeyseyn.
Waxa uu ku qeyliyay garsoorkii maxmakadda markii ay ku dhawaaqeen go'aankooda.
Xisbigiisa ayaa waxa uu ku baaqay taagerayaashiisa inay isugu soo baxaan dibed bax dalka oo dhan ah.
Iskuullada iyo dukaamada magaalada caasimadda ee Dhaka ayaa xiran, ciidanka booliiska ayaa waxa ay isku dhaceen dad banaanbaxay.
In lagu qiyaasay saddex milyan oo dadka Bangladesh ah ayaa lagu dilay dagaalkii 1971, kaasi oo keenay inay ka go'aan Pakistan.